JJN-ပျား Forex Indicator - Forex အညွှန်းကိန်းဒေါင်းလုပ်
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်း JJN-ပျား Forex Indicator
JJN-ပျား Forex Indicator
သြဂုတ် 10, 2018
JJN-ပျား Forex Indicator အဆိုပါ Forex scalpers အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းအခြားအများစုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအရိုးရှင်းဆုံးဦးရေပြားညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒီအညွှန်ပြချက်အထူးသဖြင့်ဦးရေပြားနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုဖို့ချင်ပါတယ်သူ Forex အရင်ကဆိုရင်ရန်အလွန်ဖော်ရွေဖန်ဆင်းထားသည်.
ဤသည်ညွှန်းကိန်းသာသင်၏မျက်စိနှင့်သင့် mouse ကိုတစ်ကလစ်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာအရောင်းအဝင်အားလုံးကိုလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသည်.
JJN-ပျားညွှန်ပြချက်မြှားပြသဘို့တာဝန်ရှိသည်, အစက်နှင့် signal ကိုစာသားအမျိုးအစားကို. signal ကိုစာသားအမျိုးအစားအမိန့်ထားရှိရပါမည်ဖြစ်သောမှာအဆင့်နှင့်အတူဘယ်ဘက်ထိပ်-ထောင့်ပေါ်တွင်ပြသ. တကယ်တော့ဒီအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဘို့အစောင့်ကြည့်ဖို့အဓိကအချက်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်. ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါမြှားအရောင်အတွက်လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖျော့ဖြစ်စေများမှာ. အောက်သို့ညွှန်သောလိမ္မော်ရောင်မြှားတက်ထောက်ပြသောအဝါရောင်ဖျော့မြှားတစ်ခုအထက်သို့လမ်းကြောင်းသစ်လည်းမရှိကွောငျးဖျောပွသနေစဉ်ချလမ်းကြောင်းသစ်လည်းမရှိကွောငျးဖျောပွသ.
Fig.1. အဆိုပါ JJN-ပျားညွှန်ပြချက်.
တစ်အချက်ပြပေးထားပြီးတာနဲ့, အဆိုပါညွှန်ကိန်းရှေ့ဆက်သွားနှင့်ရပ်တန့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကုန်သည်ကိုထောက်ပံ့ပေး. ဤအချက်ပြပေးသောသောပေါ်တွင်ခုံ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်မှာပြသနေကြပါတယ်သောအစက်များမှာ. အဆိုပါညွှန်ကိန်းဟာရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုအဆင့်တွက်ချက်နှင့်ယူအမြတ်အစွန်း၏. ထိုသူနှစ်ဦးအဆင့်ကိုအတူတူဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြနှင့်တစ်အချက်ပြဘို့ပေးတော်မူသောအဆင့်ဆင့်အခြားအချက်ပြမှုများအတွက်ပေးသောသူတို့အားအလားတူမဟုတ်. အဆိုပါအဝါရောင်ဖျော့အစက်ဟာရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုနေချိန်တွင်အဆိုပါလိမ္မော်ရောင်အစက်ဟာယူအမြတ်အစွန်း၏အဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်. ကမရှိသလောက် hit ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုမလိုအပ်ပါလျှင်ကြောင့်ထင်ရနိုင်ပေမဲ့, ဒါဟာအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်လမ်းအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးမှတ်တိုင်များနေရာကအမြဲကောင်းလှ၏.
စျေးနှုန်း entry ကိုအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ပြီးနောက်အမိန့်သာချထားပါသည်. ဒါကဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်မှာပေါ်အချက်ပြစာသားကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ပြကြောင်းအဆင့်ဖြစ်ပါသည်. ဝယ်ယူတဲ့ signal ကိုစာသားမပုံပေါ်လျှင်ဥပမာအားဖြင့်, စျေးကွက်စျေးနှုန်းကိုအထက်သို့ entry ကိုအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်အထိကုန်သည်စောင့်ဆိုင်းသင့်တယ်.
သင်ပထမဦးဆုံးအလုံးစုံလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်ရှိသည်. သင်သာခြုံငုံ downtrend လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ရောင်းနှင့်သာခြုံငုံ uptrend လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်မဝယ်သင့်တယ်.
အရောင်းရဆုံး: ဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်မှာပေါ်တွင်ပြသထားသော signal ကိုစာသားမ '' ရောင်း 'နှင့်လိမ္မော်ရောင်အောက်ဖက်မြှားပြသဖြစ်ပါတယ်အခါကုန်သည်တစ်ဦးရောင်းနိုင်ရန်နေရာသငျ့သညျ.
ဝယ်: ဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်မှာပေါ်တွင်ပြသထားသော signal ကိုစာသားမ '' ဝယ်ယူ '' သည်နှင့်တစ်ဦးဖြူဖပ်ဖြူရောအဝါရောင်အောက်ဖက်မြှားပြအခါကုန်သည်တစ်ဦးဝယ်နိုင်ရန်နေရာသငျ့သညျ.
Fig.2. အဆိုပါ JJN-ပျားညွှန်ပြချက်သုံးပြီးနေရာယူအမိန့်.
JJN-ပျား Forex Indicator တစ်ခု Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) ညွှန်ကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
JJN-ပျား Forex Indicator သည်သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
JJN-ပျား Forex Indicator.mq4 install လုပ်နည်း?
JJN-ပျား Forex Indicator.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ JJN-ပျား Forex Indicator.mq4 မိတ္တူ / ကျွမ်းကျင်သူများက / ညွှန်ကိန်းများ /
JJN-ပျား Forex Indicator.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator JJN-ပျား Forex Indicator.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ JJN-ပျား Forex Indicator.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးMarket က Reader ကို Forex Indicator
Next ကိုဆောင်းပါးXsuper Trend Candles Forex Indicator
အဆိပ်အ Forex ညွှန်းကိန်း
အဆုံးစွန် Scalper Forex Indicator
Bollinger ဖြစ်ညှစ် v4 Forex Indicator
အဆိပ်အ Forex ညွှန်းကိန်း ဖေဖော်ဝါရီ 18, 2019
အဆုံးစွန် Scalper Forex Indicator ဖေဖော်ဝါရီ 15, 2019
Bollinger ဖြစ်ညှစ် v4 Forex Indicator ဖေဖော်ဝါရီ 13, 2019
Chifbaw လှို Forex Indicator ဖေဖော်ဝါရီ 11, 2019
WATL Trend Lines Forex Indicator ဖေဖော်ဝါရီ 8, 2019
ဖေဖော်ဝါရီ 18, 2019
ဖေဖော်ဝါရီ 15, 2019
ဖေဖော်ဝါရီ 13, 2019